Momba anay - Hebei Jinxing Technology Co., Ltd.
|Momba ny tantarantsika
Tongasoa eto amin'ny Jinxing
Hebei Jinxing Technology Co., Ltd dia miorina amin'ny faritra fampandrosoana ara-toekarena sy ara-teknikan'ny Distrikan'i Jizhou, Hengshui, Hebei. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 1999 niaraka tamin'ny renivohitra voasoratra anarana RMB 41 tapitrisa. Mirefy 50 000 metatra toradroa ny velarany, ary 36 000 metatra toradroa ny velaran'ny fanorenana. Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana karazana fantson-tsolika aotom-bovoka, fantson-tsolika Hydraulika, fivoriambe fantsom-pifandraisana, Hose nylon, sns ho an'ny fiara mifono angovo vaovao, kamio, fiara, môtô. Ny vokatray dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena toy ny DOT, IATF 16949: 2016, SAE J1401, GB16897, 3C sns.
Manarona faritra iray an'ny
Nanompo Mpanjifa amin'ny am-po
Mihoatra ny 16 taona ny fivoarana, ny vokatra Jinxing dia malaza be amin'ny tsena anatiny ary natondrana any amin'ny firenena mihoatra ny folo any Amerika Avaratra, Moyen Orient, Eoropa ary Azia & Pasifika, noho ny kalitaon'ny vokatra tsy miova ary laza malaza eo amin'ny orinasa . Tongasoa tsara eto amin'ny orinasanay ho an'ny fizahana sy fiaraha-miasa.
Ilaina amin'ny orinasa ny kalitao. Mba hahazoana antoka ny kalitao avo lenta, ny orinasa dia nanolotra ny fitaovana fanandramana kalitao avo lenta sy ny rafitra QC henjana. Ny orinasa dia nandalo taratasy fanamarinana kalitao ISO9001 tamin'ny martsa 2002 Cert "3C" Certification tamin'ny 2005 ary "CQC" Certification tamin'ny Jolay 2008. Nandany Certificate DOT ihany koa izy tamin'ny 2006. Ny orinasa dia mitarika sy manara-maso ny fizotry ny famokarana mba hifanaraka amin'ny ISO / TS 16949. Ny rafitra fitantanana kalitao dia voamarina tamin'ny 2016.